မြန်မာတယ်လီနောကို ဝယ်ဖို့ သဘောတူချက်ရထားသူ လက်ဘနွန်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာ - ข่าวสด
မြန်မာတယ်လီနောကို ဝယ်ဖို့ သဘောတူချက်ရထားသူ လက်ဘနွန...
မြန်မာတယ်လီနောကို ဝယ်ဖို့ သဘောတူချက်ရထားသူ လက်ဘနွန်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာ
11 ก.ย. 2564 - 22:00 น.
သူ ထူထောင်တဲ့ M1 Group ဟာ မြန်မာနိုင်ငံက တယ်လီနော ဖုန်းကွန်ရက် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လက ဝယ်ယူဖို့ သဘောတူညီချက် ရထားခဲ့
လက်ဘနွန်နိုင်ငံမှာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ဘေရွတ်ဆိပ်ကမ်း ပေါက်ကွဲမှုကြီး ဖြစ်ခဲ့ပြီး အဲဒီအချိန်က အစိုးရနုတ်ထွက်ခဲ့အပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ပထမဆုံးအနေနဲ့ လက်ဘနွန် အစိုးရသစ်တက်လာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ လက်ဘနွန်အစိုးရသစ်ရဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ကတော့ နာဂျစ် မီကာတီ ဟာ လက်ဘနွန်မှာ အချမ်းသာဆုံးဖြစ်ပြီး ဝန်ကြီးချုပ် နှစ်ကြိမ်ထမ်းဆောင်ဖူးပြီးသားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူ ထူထောင်တဲ့ M1 Group ဟာ မြန်မာနိုင်ငံက တယ်လီနော ဖုန်းကွန်ရက် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လက ဝယ်ယူဖို့ သဘောတူညီချက် ရထားခဲ့ပါတယ်။
အခုလို နာဂျစ် မီကာတီက ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာပြီး အစိုးရသစ်ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေလည်း ရွေးချယ်နိုင်ခဲ့တာဟာ လက်ဘနွန်မှာ လပေါင်းများစွာ နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းဖြစ်နေမှု အဆုံးသတ်ခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် သြဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့က ဘေရွတ်ဆိပ်ကမ်းပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်အပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ အဲဒီအချိန်က လက်ဘနွန်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တဲ့ ဟာဆန် ဒီယက်က ရက်ပိုင်းအတွင်း နုတ်ထွက်ခဲ့ပြီး အဲဒီနောက်ပိုင်းကတည်းက လက်ဘနွန်အစိုးရ ဆိုပြီး ပီပီပြင်ပြင် မရှိပဲ ဖြစ်နေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘေရွတ်ဆိပ်ကမ်း ပေါက်ကွဲမှုကြီးဟာ အမိုနီယမ် နိုက်ထရိတ် တွေ အသေအချာ သိမ်းဆည်း သိုလှောင်မှု မရှိတာကနေ ပေါက်ကွဲခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး လူပေါင်း ၂၀၃ ယောက်လည်း သေဆုံးစေခဲ့
ဘေရွတ်ဆိပ်ကမ်းပေါက်ကွဲမှုနဲ့ နောက်ဆက်တွဲ နိုင်ငံရေးအကျိုးဆက်
အဲဒီ ဘေရွတ်ဆိပ်ကမ်း ပေါက်ကွဲမှုကြီးဟာ အမိုနီယမ် နိုက်ထရိတ် တွေ အသေအချာ သိမ်းဆည်း သိုလှောင်မှု မရှိတာကနေ ပေါက်ကွဲခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး လူပေါင်း ၂၀၃ ယောက်လည်း သေဆုံးစေခဲ့ပါတယ်။
ဒီပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ဒဏ်ရာရသူကတော့ ၆၀ဝ၀ နီးပါးအထိ ရှိပြီး ပျက်စီးဆုံးရှုံးရတဲ့ တန်ဖိုးကလည်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ဘီလျံနဲ့ ချီပြီး ရှိခဲ့ပါတယ်။
အခုလို ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ချိန်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါ အခြေအနေလည်း ရှိနေခဲ့တဲ့အတွက် အစိုးရနဲ့တကွ လက်ဘနွန် နိုင်ငံရေးစနစ်ကို လူအများ မကျေနပ်မှုတွေ ပိုပြီး ကြီးထွားလာစေခဲ့ပါတယ်။
အစိုးရကို မကျေနပ်ကြသူတွေက အဓိကအားဖြင့် အစိုးရရဲ့ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွေ၊ စီမံခန့်ခွဲရေး မကျွမ်းကျင်မှုတွေနဲ့ နိုင်ငံရေးထောက်ခံမှုအပေါ် အခြေခံတဲ့ အလုပ်ခန့်မှုတို့ကို ဝေဖန်ကြပါတယ်။
အခုလို ပေါက်ကွဲမှုကြီး မဖြစ်ခင် ၂၀၁၉ နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ကတည်းက ရှိနေတဲ့ ပြည်တွင်းဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်းကြောင့်လည်း အခြေအနေတွေ ပိုဆိုးခဲ့ရတာ ဖြစ်ပြီး လက်ရှိအနေအထားမှာ လက်ဘနွန် ပေါင်ငွေ တန်ဖိုးက ကိုးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းအထိ ကျနေသလို လူဦးရေရဲ့ လေးပုံ သုံးပုံ အထိ ဆင်းရဲမွဲတေမှု အညွှန်းကိန်းအတွင်း ကျရောက်တဲ့အထိ ဖြစ်နေရပါတယ်။
လက်ဘနွန်ဝန်ကြီးချုပ်သစ် နာဂျစ် မီကာတီက အစိုးရအဖွဲ့သစ် ကြေညာပြီးနောက်ပိုင်း ဘီဘီစီကို စကားပြောခဲ့ရာမှာ သူ ပထမဦးစားပေးလုပ်ရမယ့် အရာတွေထဲက တခုကတော့ နိုင်ငံတကာ ငွေကြေး ရန်ပုံငွေအဖွဲ့နဲ့ တွေ့ဆုံစကားပြောပြီး လက်ဘနွန်ကို ဘဏ္ဍာရေးရာ ကယ်တင်ဖို့အတွက် ချေးငွေအစီအမံတခု သဘောတူနိုင်ဖို့ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
လက်ဘနွန်ပြည်တွင်းက ပညာရေးနဲ့ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေမှာ ပိုဆိုးလာတဲ့ အကျပ်အတည်းတွေရှိနေတာကိုလည်း သူက အသိအမှတ်ပြု ပြောဆိုခဲ့ပြီး နိုင်ငံကနေ ထွက်ခွာသွားတဲ့သူတွေ များလာတာကိုလည်း ကြုံနေရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တယ်လီနောရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံလုပ်ငန်းပိုင်းကို ဝယ်ယူ ပိုင်ဆိုင်လိုက်နိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းအနေနဲ့ တယ်လီနော ရရှိထားတဲ့ ဈေးကွက်ဝေစု ဖြစ်တဲ့ အသုံးပြု ၁၉ သန်းကိုလည်း လက်ခံရယူ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်
နာဂျစ် မီကာတီရဲ့ M1 Group က မြန်မာတယ်လီနောကို ဝယ်ယူခဲ့မှု အခြေအနေ ဘယ်လို ရှိနေသလဲ
နာဂျစ် မီကာတီဟာ M1 Group ကို ထူထောင်သူ တဦးဖြစ်ပြီး တယ်လီနောရဲ့ မြန်မာအခြေစိုက် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတွေကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လမှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၀၅ သန်းနဲ့ ဝယ်ယူဖို့ သဘောတူထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို ဝယ်ယူပြီးချိန်မှာ M1 Group အနေနဲ့ ရှေ့လာမယ့် သုံးနှစ်အတွင်း မြန်မာပြည်တွင်း ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၃၃၀ တိုးချဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားမယ်လို့ ကြေညာထားခဲ့ပါတယ်။
အခုလို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရာမှာ အဓိကအားဖြင့် ဘရော့ဘန်း အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု၊ ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ရက်တိုးချဲ့နဲ့ အခြား ဆက်စပ် ဝန်ဆောင်မှုတွေမှာ အသုံးပြုမယ်လို့ M1 Group ရဲ့ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်ပြီး အခု လက်ဘနွန်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ တူတော်စပ်သူ အက်ဇမီ မီကာတီက ပြောဆိုထားပါတယ်။
လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ အခုလို M1 Group က မြန်မာတယ်လီနော ဝယ်ယူမှုကို မြန်မာစစ်ကောင်စီက သဘောမတူတော့ပဲ မူလပိုင်ရှင် တယ်လီနောကို အခြားလုပ်ငန်းကိုသာ လွှဲပြောင်းရောင်းချဖို့ ဖိအားပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေလည်း ထွက်ပေါ်နေပေမယ့် တရားဝင် ထုတ်ဖော်ပြောကြားတာတော့ မရှိသေးပါဘူး။
တယ်လီနောရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံလုပ်ငန်းပိုင်းကို ဝယ်ယူ ပိုင်ဆိုင်လိုက်နိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းအနေနဲ့ တယ်လီနော ရရှိထားတဲ့ ဈေးကွက်ဝေစု ဖြစ်တဲ့ အသုံးပြု ၁၉ သန်းကိုလည်း လက်ခံရယူ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ မြန်မာတယ်လီနောကို ဝယ်ဖို့ သဘောတူချက်ရထားသူ လက်ဘနွန်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာ